शिध्दबाबा सधै किन यस्तो ? -
शिध्दबाबा सधै किन यस्तो ?
२१ आश्विन २०७४, शनिबार १६:४० July 19, 2018 mophasalLeaveaComment on शिध्दबाबा सधै किन यस्तो ?
माधब प्रसाद गैरे
२०४६ मा प्राप्त बहुदलीय प्रजातन्त्रमा तत्कालीन नेतामहानेताको एउटामात्र बोली देशमा निरंकुश भयो एकजहानिया सरकारले देश विकासको केही गर्ने भन्दा पनि परिवार लालनपालन एेस अाराममा राज्यको ढुकुटी सर्वनास पार्यो भन्दै जनभावना समेटिएका थिए।
तत्कालीन परिपाटी वास्तविकता बुझ्नुपर्छ भन्दै जनताले दिएको विश्वास नेताले विभिन्न शक्ति पछाडि लाग्ने गुण्डा राख्ने र जसरी हुन्छ सत्तामा पुग्ने भन्दा अर्को खेलमा कहिल्यै लागेनन यसकारण नै हामी संसारमा बिकोसोन्मुख बाट उभो हैन उधो भएका छौ।
बिकास कहाँ र किन होइन यहाँ सम्पत्ति कसरी र छोराछोरी पढाइ कुन देशमा भन्दा कुनै सोच नभएका देशका महान नेताका ईतिहास साक्षी रहेको छ।
विगतका पुस्तक अध्यायनका हिसाबले उनै नेतागण राजाका पालामा मैन्त्री बहुदलीय र गणतन्त्रमा पनि उनै सर्बेसर्वा हामी सधै पछाडि पर्नुको खास कारण यहि हो ।
अन्य देशको ईतिहासमा एउटा परिवर्तन पछाडि पुराना नेताका मुद्दा हेरि जेल सम्मका सजाय भएको हुन्छ भने हाम्रो देशमा सबै उनै बाट चलेको हुन्छ जब सम्म यस परिपाटीको अन्त्य हुदैन तब सम्म कुनै परिवर्तनको अास गर्नु हामी खराब हौ।
२०४८ सालमा पाल्पा नेपाली कांग्रेसको गम्भीरजंग कार्कीले जित हासिल गरेको र तत्कालीन समयमा दोभान स्कुलको एउटा कार्यक्रममा उनले गरेको एउटामात्र कुराको सम्झना यश मानसपटलमा अझ ताजा छ। वुटवल पाल्पा सडक खण्डमा भएको समस्याको निराकण मलाई जिताउनु ६ महिनामा हटाउन सकिन भने मलाई जे पनि गर्न सक्नुहुनेछ ।
पाल्पा दोभानमा हरेक जडिबुटी फलफुल दूध माछामासु सबै वजार नै बुटवल भएको कारण यो सबैभन्दा पहिला काम हुनेछ लेखेर राख्नुस अाज गम्भीरजंग कार्की पाल्पाको तानसेनमा अलिसान घर बनाई अारामको जिन्दगी जिउदै छन। छोरा छोरी टुंगोमा पुर्‍याउनु र तानसेनका खाली जग्गामा हालीमुहाली गरेर सेवाका रूपमा सम्पत्ति जोडेर बसेका छन। उनले के गरे पाल्पालाई ? शिध्दबाबामा दिनदहाडै कति मान्छे मरे यिनका अाखामा कहिल्यै परेन। उनलाई मात्र दोष दिन चाहन्न म तत्कालीन पाल्पा गुल्मी रूपन्देही कास्की अथवा सिध्दार्थ राजमार्ग प्रयोग गर्ने हरेक जिल्लाका सांसदहरूलाई सोध्छु मैले ? के गरेका छौ शिध्दबाबा क्षेत्रलाई?
कतिका घर उजाड भए गाँस काटिए सिन्दुर पुछियो प्रोफेसर देखि कति गए त्यै समस्याले गए तिम्रो नजर किन गएन?
गम्भीरजंग मात्रै होइन त्यस पछाडिको सोमप्रसाद पाण्डेले २०५१ यता अाजसम्म के गर्ने पहल भयो? काठमाडौंमा घर? छोरा डाक्टर अजि के? खै सिध्दबाबाको समस्याको निराकरण ? विगतको अोलिसरकारले अध्यायन गर्यो वजेट खै? के जनता मतका लागि मात्र ? वाटोमा हिडेर पहिरो हेर्दैमा समस्या समाधान हुनेभए नेताज्यु म हरेक समस्यामा चौविसै घण्टा हिडेर नजर फिराउने थिए।
नेता जी कसैले हजुरलाई बिस्वास गरेको केही बिकास र सहुलियतको अासमा हो हजुरलाइ सम्पत्ति र ऐस अारामका लागि होइन स्मरण रहोस नेता जी हजुरका कारण वगनासकालीको गढ यम्घामा हाम्रो हार भएको मात्र होइन त्यहाँका जनताको अगाडि तपाईं र तपाईंको कारण कुनै दिन सुर्यचिन्हमा बाहेक मत नहाल्ने उसपटक रूखमा मत जायर गरेका छन फर्केर हेर्नुस् दर्पुक, गुगा मेउछाप यम्घा कुलको १७.४४% मत गायव भएको छ सोच्न सक्नुभएको छ?
तपाईंको बिगत २० वर्षको काम प्रगति विवरण दिनुस नेता जी जनताको मन छुने काम के गर्नुभयो ? के गर्नुपर्ने थियो कहाँ कति काम भयो ?
तपाई सबैले एउटामात्र मतमाग्ने सिध्दबाबा समाधान गर्ने छु। कोरिडोर बनाउने छौ फलानो पानी यस्तो गर्ने छौ नेतागण फर्केर हेर्नुस् तपाईंबाट जनताले के पाए?
पाल्पाका वोटेसमुदायलाइ ब्यबस्थापन गर्ने छु भनेको २०५४ मै हो ।कालीगण्डकीमा पक्कीपुलका कुरा गरेको २०५१ कै निर्वाचनमा हो । दैलातुङ्ग तानसेन सडक, रानीमहल , हुदै रिडीमार्ग निर्माण देखि पिचसम्म गर्ने योजनाको बाचा २०६३ मा हो कहाँ गए योजना तातोपानी अाज हरेकले पैसा जनश्रमदानबाट येनकेन अाउनै लागेको भए पनि राज्य र सांसदहरूबाट कस्तो खालको सहयोग भएको छ बाहिर बसेर पनि अध्यायन गरेकै छौ जनता तिखारिएको धनुष हो सहि स्थानमा प्रयोग गर्नुपर्दछ।यसबारेमा स्पस्टिकरण जनताले लिगिसकेका छन।
सिध्दबाबाका बारेमा कहि कोहि बोलेर समस्या समाधान हुने होइन । मन तन र धन सहयोग सबै मिलाउन सक्नुपर्छ सधै बाटो हिडदा कुरा गर्ने र फर्केपछि सबै भुल्ने नियतले अाज कति मरे? हामी स्पस्ट छौ तिमी राजनीतिक नेता बाट अब केही हुदैन भए खाली पेटभर्नु घर वनाउनु गुण्डागिरीपोस्नु घुसखोरी तस्करीको संरक्षण गर्नु ?
अब जनताले केही अास गर्नु गलत हो छ र हुन्छ पनि । सक्छौ गाउमै नफर्क फर्कने हो भने अहिलेसम्मको प्रगति विवरण साथमा गर्न सक्ने काम लिएर अाउ ।
रातिको समयमा घरको बरंडामा बसेर भुकेको कुकुरले केही माखो मार्दैन यसबारेमा सोचबिचार गर।
कहिले बन्दछ सिध्दबाबा र कहिले हुन्छन् जनता सुरक्षित यसका बारेमा स्पस्ट पार होइन भने अब जनता चुपचाप बस्दैनन नेता भगाउ अभियान सुरू पाल्पाबाटै सुरू हुनेछ ।
जनताको पक्षले नेतालाई सजक बनाउन नसक्नेलाई प्रतिनिधित्व गराउन बाट वंञ्चित गराअौ।
स्थानीय , जिल्लाका राजनीतिक नेताले कहाँ के गरेका छन कसरी चलेका छन अायब्यय कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ सबै चनाखो भए र हेरौ नत्र यिनैले सबै काम वनाउने बिगार्ने गर्दछन।
सिध्दबाबाका बारेमा जबसम्म स्पस्ट धारणा र काम सुरू हुदैन नेतालाई पानी पनि नसोधी बस्न पनि नदिई भगाअौ।
हामी असुरक्षित छौ नेता राज्यको ढुकुटीबाट हेलिकप्टरमा सयर गर्दछन। यिनीहरूको घर बासमा दबाब श्रृजना गरौ हामी हामीले चुनेको नेता फिर्ता बोलाउन सकिन्छ नगर्नेलाई पद र कुर्ची दिने होइन फिर्ता बोलाउ ।
जब सम्म हामी यति गर्न सक्दैनौं तबसम्म हामी अगाडि होइन पछाडि परिन्छ। सिध्दबाबाको समस्या पनि जहाकोत्यहि रहन्छ जनता सजग बनौ।
३२ श्रावण २०७३, मंगलवार १९:५१ August 16, 2016 wwwmophasal